Ndị egwu egwu egwu kacha mma nke Windows 11 | Akụkọ akụrụngwa
Egwu kachasị egwu maka Windows
N'agbanyeghị eziokwu na music gụgharia ọrụ aghọwo ndị kasị eji ngwá ọrụ site na ọtụtụ ndị ọrụ mgbe ọ na-abịa na-ege ntị ha mmasị music, ọtụtụ ndị bụ ndị nwere ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke songs, gbanwere ozugbo site na CD gị na ogo kacha elu ha na-ahọrọ iji PC ha iji jikwaa ya n'oge niile, na mgbakwunye na ịkpọ ya jikọtara na ngwa ọdịyo.
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịga n'ihu na-eji uru ọba akwụkwọ egwu gị, ọbá akwụkwọ egwu ahụ nke mebiri ọtụtụ afọ imepụta, n'isiokwu a anyị ga-egosi gị ihe ha bụ ndị kachasị egwu egwu maka WindowsNdị na-egwu egwu na-eme mmelite kwa afọ, ọ bụghị ndị ghọrọ akụkọ mgbe ochie mana emelitebeghị ha ọtụtụ afọ.
N'ime ndị egwuregwu niile anyị na-egosi gị n'okpuru, ha niile Ha na-enye anyị nsụgharị n'efu na mmachi ndị ọzọ, mmachi na anyị nwere ike ịwụli ịzụta ngwa ahụ, mana ha pere mpe. Ugbu a ihe niile dabere na mkpa na mmasị ị ga-edebe ọbá akwụkwọ gị n'usoro na egwu.
2 Onye njikwa egwu Waf
Onye ọkpụkpọ a na-eri obere ego, ọ bụghị naanị na-enye anyị ohere ịnụ ụtọ egwu kachasị amasị anyị, kamakwa na-enye anyị ohere igwu ụdị vidiyo ọ bụla, gụnyere ndị edere na ogo 360, ọ bụ ezie na maka nke a anyị na-eme ịkwesịrị ibudata codecs kwekọrọ, ihe na-anaghị eme ma ọ bụrụ na anyị na-ekwu maka faịlụ egwu. GOM Player na-enye anyị ọnụ ọgụgụ buru ibu nke skins iji hazie onye ọkpụkpọ anyị ka o kwekọọ na mmasị anyị, ọrụ nke ọ bụghị ndị egwuregwu niile n'ahịa na-enye.
Ọ bụrụ na mgbe anyị na-ege egwu, anyị na-agagharị n'ụlọ, n'ihi ngwa GOM Remote, anyị nwere ike achịkwa playback si anyị ama. hazie aesthetics nke onye ọkpụkpọ.
Budata GOM Player
Onye njikwa egwu Waf
Waf Music Manager bụ ngwa dị mfe ma dị irè ndị otu a music player, song nhazi na mkpado editọs na otu fechaa ngwugwu, na-enye gị ohere ige egwu ma gbanwee nkọwa egwu site n'otu ebe. Ngwakọta ihe nchọgharị faịlụ ahụ na-enye gị ohere ịlele faịlụ egwu niile akwadoro na ebe dị na kọmputa gị na oge ha, ebe ọrụ ọchụchọ nwere ike iji nyochaa abụ site na aha egwu, aha ma ọ bụ ọba.
Ngwa ahụ na-enye gị ohere idezi data mkpado nke faịlụ egwu ahọpụtara (arụ ọrụ ogbe na-ahapụ), na-enye ubi editable maka aha onye egwu, aha egwu, album, akara, akara akara, afọ, ụdị, onye mbipụta akwụkwọ, ndị na-ede akwụkwọ na ndị ndị isi N'ụzọ dị otú a, ị nwere ike ịhazi nchịkọta gị n'ụzọ dị irè karị. Wal Music Manager na akwado dika Windows 8.1.
ZPlayer bụ ihe ọkpụkpọ egwu sitere na Java nke na-enye anyị ohere ịnụ ụtọ egwu kachasị amasị anyị na interface dị mfe iji na-enweghị nsogbu. Onye ọkpụkpọ a na-akwado ọtụtụ ụdị ọdịyo dị ka MP2, MP3, WAV, Ogg, Flac, MID, CDA, MOD, Dolby AC3 ... Anyị nwere ike ịmepụta listi ọkpụkpọ nke gosipụtara anyị aha egwu ahụ, oge, ogo na mgbe e kere ya. ZPlayer bụ ihe ọkpụkpọ dakọtara na ụdị Windows niile, naanị ya na-enye anyị ohere igwu egwu ọdịyo, ọ dị obere ma onye ọrụ ya na-enye anyị ohere ịkwụsịtụ ma ọ bụ kpọọ egwu ahụ, kwụsị ya, bulie abụ ma ọ bụ laghachi na nke gara aga.
AIMP sonyere ndepụta ogologo nke egwu egwu dị maka Windows. Akụkụ bụ isi nke ọ na-enye anyị bụ ndakọrịta na skins dị iche iche iji hazie onye ọkpụkpọ ahụ maka ụtọ anyị. AIMP bụ nwa afọ dakọtara na MP3, AAC, FLAC, MAC, M3U, OGG, OPUS, RMI, TTA, WAV na WMA faịlụ n'etiti ndị ọzọ. Nke a ọkpụkpọ na-ewe obere oghere dị na draịvụ ike anyị na ọ bụ dakọtara dị ka nke Windows Vista.
MusicBee bụ otu n'ime ndị egwuregwu na-enye anyị ọtụtụ nhọrọ na obere oghere. Kama ịnye anyị ihe nchọgharị faịlụ, anyị ga-ebubata folda ebe faịlụ egwu ga-amalite n'ụdị. Ọ bụrụ na n'etiti metadata nke faịlụ ọdịyo, etinyere album ma ọ bụ abụ egwu, a ga-egosipụta na ngwa ahụ. MusicBee na-enye anyị ụdị ngosi ngosi dị iche iche, mmechi akpaka, gbanwee nhazi ọdịyo, nnweta igwekota egwu, gbanwee aha nke faịlụ ọdịyo ... Egwu a dakọtara na Windows Vista ma dakọtara na nsụgharị 64.
Ọzọ nke egwuregwu na-enye anyị a ọnụ ọgụgụ buru ibu nke nhọrọ bụ MediaMonkey, a playback na ike ijikwa a n'ọbá akwụkwọ na-enweghị messing ihe karịrị 100.000 faịlụ, ọkụ CD ozugbo site na ngwa, chọọ na mkpado, leta, mkpuchi na metadata ndị ọzọ, jikwaa ụdị egwu dị iche iche ...
Ọ na-enye anyị ohere igwu egwu ọ bụla audio format enweghị na-echegbu onwe banyere inwe iji tọghata ndị ọzọ formats, anyị nwere ike ịmepụta listi ọkpụkpọ nke niile songs anyị chọrọ na-enweghị ókè na mgbakwunye na iji na Auto DJ ọrụ nke mere na ọ na-akpaghị aka na-elekọta nke na-akpọ songs si anyị n'ọbá akwụkwọ. N'ime nhọrọ nhọrọ anyị na-ahụkwa ohere ịtinye skins, ngwaọrụ iji chọpụta egwu ọhụrụ, ngwugwu asụsụ ...
Ọ bụ ezie na ngwa a kacha mara amara maka ịbụ onye nchịkọta akụkọ magburu onwe ya maka faịlụ ọdịyo, ọ na-enyekwa anyị ọrụ dị iche iche iji jiri ya dị ka ọkpụkpọ egwu, mana yana mgbakwunye agbakwunyere na ọ na-enye anyị ohere idezi egwu kachasị amasị anyị iji mepụta, site na ya, a otu egwu nwere otutu egwu. Naps na-achọ ihe niile na otuIji zere inwe ọtụtụ ngwa arụnyere na kọmputa gị, Audacity bụ ngwa ịchọrọ.
Ọ bụrụ na egwu anyị abụghị naanị na PC anyị, mana anyị na-ejikwa ọrụ egwu egwu egwu, ijikwa ozi ahụ niile dị mfe na Tomahawk, onye ọkpụkpọ egwu n'efu enwere ike ijikọ ya na Google Play Music, Spotify, Deezer, iTunes, SoundCloud ruo YouTube. N'ụzọ nke a, ọ bụla song na anyị na-achọ, anyị ga-ahụ ya mfe, ma na draịvụ ike anyị ma ọ bụ na otu n'ime ndị a gụgharia music ọrụ. Ọzọkwa, ọ bụrụ na anyị bụ otu n'ime ndị ọrụ na-achọ ịkọrọ ndị enyi anyị ihe masịrị anyị, Tomahawk na-enye anyị ngwaọrụ zuru oke iji mee nke a.
aTunes, nke sitere n'ike mmụọ nsọ nke Apple si iTunes, na-enye anyị interface dị mfe ma doo anya ka anyị nwee ike ịchọta ma kpọọ egwu niile bụ akụkụ nke ọbá akwụkwọ anyị. N'ihi nhọrọ mbubata songs ma ọ bụ directories, anyị nwere ike jiri nwayọọ nwayọọ jikwa ọbá akwụkwọ anyị na-enweghị ịlụ ọgụ na ọnụ ọgụgụ buru ibu nke egwu ozugbo anyị malitere.
aTunes dakọtara na ụdị ọdịyo niile dị na ahịa, n'ihi ya, anyị agaghị mkpa iji tọghata songs ka a ọzọ dakọtara format na-enwe ike na-egwu ha, na nke a magburu onwe free ngwa. Dị ka ndị ọzọ ọrụ, aTunes-enye anyị ohere jikọọ Last.fm na mgbakwunye na-achọta niile songs na-duplicated, ihe na nnọọ ole na ole ngwa na-eme.
VLC abụrụla, ihe karịrị afọ, ngwa ọrụ kachasị mma anyị nwere ike ịchọta ugbu a n'ahịa n'efu ka anyị nwee ike ige egwu abụọ kachasị amasị anyị ma nwee vidiyo ọ bụla n'ụdị ọ bụla, ebe ọ bụ dakọtara na ha niile. Ezie na ọ bụ eziokwu na aesthetics bụghị ndị kasị pụtara ìhè niile, na VLC anyị agaghị enwe nsogbu ọ bụla kpọọ usoro egwu ọ bụla.
Ọ bụrụ na anyị chọrọ ka anyị n'ọbá akwụkwọ mgbe niile iji na ha na nwoke na mkpuchi, Apple si iTunes bụ ihe magburu onwe nhọrọ mgbe na-ege ntị anyị mmasị music, ee, ị ga-eji akọ na uche na data niile nke egwu ọ bụla, nke mere na ngwa ahụ nwere ike idozi ma kpokọta ha n'ụzọ ziri ezi. Ọ bụrụ na ị nwere iPhone, iPad ma ọ bụ iPod Touch, ọ ga-abụ na ị nwere ugbua itinyela ngwa a ọbụlagodi na ị na-eji ya iji mee nnomi ndabere, ebe ọrụ nke mere ka anyị nwee ike ịnyagharịa site na Storelọ Ahịa ma wụnye ha ma emechaa na anyị iOS ngwaọrụ e wepụrụ mgbe ntọhapụ nke iOS 11.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Egwu kachasị egwu maka Windows
Nintendo imechi Wii Shop na 2019